Ukufakelwa kwekhompyutha → Ukufakelwa kwekhompyutha / impahla ye-P&M yokunxiba
Ukongeza kwimpahla, ukuhonjiswa kuhlala kwenziwa kwiimveliso ezinjengeengxowa, iminqwazi, iitawuli kunye neebhafu zokuthambisa. I-logo eyimfakamfele yomelele ngokuqinisekileyo kwaye iyamelana nokuxhaphaza kuneendlela ezizezinye zokumakisha kusetyenziswa imizobo yokubambelela.
Ukuhonjiswa kwekhompyuter kuthelekisiwe kwezoqoqosho. Nangona kunjalo, izinto ezininzi zidlala indima kuxabiso oluchanekileyo. Ngokwabo, ukuhombisa kubiza ixabiso eliphantsi xa u-odola iimveliso ezininzi. Ukongeza, ubungakanani bokuhonjiswa kunye nokuntsonkotha kwemizobo kunefuthe elikhulu kwixabiso, eliguqulela kuxabiso loxinano lokuhombisa. Ubuninzi bokuhombisa Kwakhona, inani leendawo ekubekwe kulo ubugcisa (umzekelo ilogo ngaphambili kwesifuba sasekhohlo + ilogo embindini womqolo) kubalulekile kumaxabiso eyunithi. Ixabiso alisoloko lichaphazeleka kwinani lemibala esetyenzisiweyo, njengoko umatshini wokuthunga unemisonto emininzi. Iindleko zokulungiselela kufuneka zongezwe kwi-odolo yokuqala yokuhombisa Inkqubo yokuhombisaesele ikwisiseko sedatha kwaye ke ayongezwa kwi-odolo elandelayo.
uyilo nolwenziwo: Iipuzzle zigqibelele